Sawirkani waa Axmed Sh. Faarax Colow oo loo yaqaannay Dhuxul. 1980kii ka hor wuxu ka tirsanaan jiray ciidammadii Daraawiishta ee dawladdii Soomaaliyeed. Xilli aan is-leeyahay wuxu ku beegnaa 1978kii ama 1979kii ayuu ka mid noqday ciidammadii Jabhadihii Xoreynta ee Somali-galbeed. wuxu ka mid noqday guutadii 4aad ee Gaaskii Axmed Gurey. Wuxu ka mid ahaa Dhuxul Taliyayaashii ugu horreeyay ee Guutadii 4aad ee Gaaskaa Axmed Gurey oo markii danbe noqotay unuggii ciidan ee ugu horreeyay ee SNM. Guutadaa 4aad waxay degtay markii ay tallowdayba xeradii ama saldhiggii ugu horreeyay ee SNM oo ahayd Durya ama Durya-dheer sida dadka qaarkii u yaqaanno.
Markii dalka la xoreeyay, Axmed Sh. Faarax (Dhuxul) wuxu noqday Taliyihii Ciidankii Birmadka booliska Somaliland, waxaanu ku geeriyooday Hargeysa 2000 isaga oo xilkaa haya. naxariistii janno Ilaahay ha ka waraabiyo.
Goobtu waa Cammuud, halkanna waxa ku sawiran qayb ka mid ah ardaydii ku jirtay Dugsigaa xilli sannadku ahaa 1957kii. Waa sawir aanu ka martinay Anglo-Somali Society. Sawirkan waxa ka muuqda: Taagan (bidix): Ismaaciil Haybe, Cabbaas Dhoorre oo booliska ahaan jiray, Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo) oo ah Madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland iyo Cabdillaahi Siciid Caabbi oo ka mid ahaa saraakiishii hoggaaminaysay Inqilaabkii 1961kii ka dhacay gobolladan woqooyi. Waxa fadhiya marka bidixda laga soo bilaabo: Muuse Axmed Boorre, Muuse Xaaji Diiriye (Idaar) oo mar noqday Guddoomiyihii Maxkamadda Sare ee Somaliland, Cali Cabdilqaadir Faarax oo Addis Ababa jooga iyo Siciid Bile oo ahaan jiray sarkaal boolis ah.
Bal hadda u fiirsada sawirka iyo sida ay u lebbisan yihiin. ma mooddaan in ay Yurub iyo dhul baraf ka da'ayo joogaan. Sidaas ayaad ku garanaysaan cimilada is-beddeshay iyo dhulka kululaaday. Daawasho fiican.